Ejiri “onyonyo” na ihe ngosi vidio “Coral” nke Pixel 4 | Gam akporosis
Ihe oyiyi a kpochara nke pikselụ 4, kpọmkwem nke ndị «Coral»
N'ụbọchị ekpughere iPhone ọhụrụ, Google agbaala ọtụtụ onyonyo nke Pixel 4. Ha bụ kpomkwem captures nke "Coral" nlereanya na nke i nwere ike n'ụzọ zuru okè na-ahụ "agba" nke a ọnụ na ya gam akporo 10 na ihuenyo.
Ihe onyonyo ndị a sitere na vidiyo Google wepụtara n'onwe ya nke gosipụtara ya ụdị Coral na nke ahụ na-esote usoro njide nke na-egosi anyị ekwentị na nkọwa dị elu. Na ndị ọzọ okwu, ọ bụghị a zuru ezu na-efu.
Wezụga ụnyaahụ TV ad video, na ihe oyiyi ndị a ị pụrụ ịhụ nsụgharị ojii na nke ọcha nke Pixel 4. Ekwentị nke na-eguzo na n'ihu maka oke bezels (na nke ahụ bụ ihe ijuanya maka nke ahụ) yana maka azụ nke igwefoto na-ewere ọnọdụ etiti na nnukwu square ahụ.
Ọ ga-adị mkpa ịma ihe mere na-agafe notch, ihe ọzọ eji emepụta ihe abụghị ezigbo mma, mana na ọ dịkarịa ala anaghị akwado ndị ochie ama aghụghọ. Ebe ahụ dị na azụ na-ezobe anya m atọ na ihe ọkụ ọkụ bụ.
Ntị maka Pixel 4 na-acha ọcha n'ihi na square ahụ na oji na-eme ka ọ bụrụ ekwentị "panda". Vidio nke ụdị "coral" na-akwado ihe niile agbapụtala n'oge na-adịbeghị anya wee kpọrọ anyị ozugbo ka anyị zute Pixel 4 n'aka. Ekwentị site na nke anyị ga-echere maka ihe ịtụnanya metụtara sọftụwia ahụ, nke emere aha, ọ bụ ezie na Google anaghị echefu nhọpụta ahụ site na nzacha ha tupu.
Un Pixel 4 anyị nwere olile anya ga-emeziwanye ihe a hụburu, Ọ bụ ezie na on aesthetic larịị anyị nanị anọgide "foto" n'ihi na mkpebi na-aga si notch ma ọ bụ na Samsung format nke "niile na ihuenyo" na Note10 na S 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe oyiyi a kpochara nke pikselụ 4, kpọmkwem nke ndị «Coral»
Nwere ike ibudata Vivaldi maka gam akporo